May 2012 – Everybody Read TChen
ကိစ္စတော်တော်များများက တယောက်ယောက်က ပြောတယ်ဆိုတာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်နာရတယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိတ်ခံစားရတာပဲလေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဘယ်နှခါ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ ဘယ်နှခေါက်မျှော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာပဲလေ တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်ကို ရဖို့ ခက်တယ်ဆိုတာကို ပြတာပါပဲ ကိုယ့်တို့ကြားထဲမှာလဲ တယောက်ယောက်က ပြောတာနဲ့ ပြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရတဲ့ အချစ်က နောက်ဆုံးတော့လဲ မျက်နှပန်းမလှရှာဘူးပေါ့ အခါတရာ ချစ်ခဲ့တာက တခါလောက် လှပတဲ့ အချစ်ကိုရှာတွေ့ဖို့ပဲ မျှော်လင့်တာပါ နောက်တခေါက်ကျရင် ကိုယ်ပို ရဲရင့်ပါ့မယ် ဆောင်းညတွေ တတိတိနွေးလာခဲ့ရင် ပင်လယ်ပြင်ကြီးလဲအပြာတွေဖျော့ဖျော့လာခဲ့ရင် လရောင်ဖြူဖြူဟာလဲ ညစ်လာခဲ့ရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေက အဲ့လောက်မလွယ်ပါဘူးဆိုတာကို ပြတာပါပဲ ဆောင်းညတွေ နွေးလာပြီးတော့ နွေညတွေရဲ့ အပင်တွေပေါ်မျာ ပုရစ်တွေမရှိခဲ့တော့ရင် အိုမင်းသွားတဲ့ အတိတ်ရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေသာသာပဲဆိုရင် အဲ့တာတွေက နာကျင်မှုတွေဟာ ဘယ်တုံးကမှ အဖြေမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကို ပြတာပဲပေါ့ ဆောင်းညတွေနွေးလာပြီး ပျိုမြစ်မှုတွေလဲ လေနှင်တဲ့ တိမ်တွေလို လွင့်ကုန်ခဲ့ရင် လှပတဲ့ ပုံပြင်တိုင်းမှာလဲ မလှပတဲ့ အလှည့်အချိုးတွေနဲ့ပေါ့ အဲ့တာတွေကလဲအချစ်ကို နှစ်လိုဖွယ်ရာ အနေနဲ့ပဲ မြင်နေခဲ့ကြလို့ပေါ့ အရေးကြီးတာက ကိုယ်တို့တွေအဲ့ဒီ အချစ်တခု ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာပါ။ 歌词： 很多事情 不是谁说了就算
制作人 – 孙燕姿 / Kenn C
制作助理 – 陈蔚甄
编曲/弦乐编写/吉他/贝斯 – Kenn C
和声编写 – 孙燕姿 / Kenn C
和声 – 孙燕姿
录音 – Kenn C/ Creation Studios (Singapore)
混音 – 沈文钏/ Pink Noise Studios (Singapore)
混音助理 – Desmond You
词OP/SP – 福茂著作权 Linfair Music Publishing Ltd.
曲OP – 怪兽音乐制作
曲SP – Universal Music Publishing Ltd. Taiwan
Posted on May 21, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုမျာ3း Comments on နွေးတဲ့ ဆောင်းည
Q:MSM ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
A:MSM ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်သလဲလို့မေးလာတော့ ဘယ်လိုမှမနေပါဘူး။ တခုခုမြင်တယ်ဆိုတာ အဲ့တာ သူများနဲ့ မတူလို့ပေါ့။ ထူးခြားနေလို့ပေါ့။ MSM ဆိုတာလဲလူတွေထဲက လူပဲ အဲ့တော့ ဘယ်လိုများထူးပြီးမြင်နေစရာလိုမလဲနော်။ ယောကျာ်းဖြစ်ရတာ ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ မိန်းမဖြစ်ရတာ ဘယ်လိုမြင်လဲ လို့ ဘယ်ယောက်ျား ဘယ်မိန်းမ မှ အမေးမခံရဖူးဘူး လို့ ထင်တာပဲ။ မေးရင်လဲ တော်တော်ကြောင်မယ် အဲ့တော့ ကိုယ်လဲ လူထဲကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူး။ MSM ဖြစ်တာ ယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူး။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမကြိုက်တယ်၊ မိန်းမတွေက ယောက်ျားကြိုက်တယ်၊ တချို့ ယောက်ျားတွေက ယောက်ျားပဲ ကြိုက်ပြီးတော့ တချို့မိန်းမတွေက မိန်းမပဲ ကြိုက်တယ်။ တချို့ကျတော့လဲ ဘာမှမကြိုက်ဘူး တကိုယ်တည်းနေရတာပဲကြိုက်တယ်။ ကဲ ဘာများထူးလို့လဲ။ ဒီလိုစမေးနေတယ်၊ ဖြေနေရတယ်ဆိုတာကိုက ကိုယ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူများတွေနဲ့ မတူ ထူးခြားနေတယ် လို့ ခွဲလိုက်ပါပြီ။ MSM ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ငယ်စရာမဟုတ်သလို ဂုဏ်ယူစရာလဲမဟုတ်ဘူး ဒါက ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်မြင်တာကတော့ လူတယောက်ဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခိုးဆိုးလုယက်တွေ လုပ်မနေဘူး။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ဒီ့ထက်ပိုကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် တထောင့်တနေရာ တတတ်တအားလုပ်ပေးနေနိုင်တယ် ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိတာပဲ။ ယောက်ျားမို့လို့ မိန်းမထက်ပိုမြတ်တယ်တို့ မိန်းမက ယောက်ျားတွေထက် တဆင့်နိမ့်တယ်တို့ဆိုတာတွေက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်တွေပါ။ လောကကြီးမှာ ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူက ပိုမြင့်မြတ်ပြီး ဆိုးတာလုပ်တဲ့လူက မမြင့်မြတ်ဘူး ဒါပဲ။ ယောက်ျားမိန်းမတောင် အဆင့်ခွဲစရာမလိုရင် MSM တွေဆို ပိုလို့တောင် အဆင့်ခွဲစရာမလိုသေးတယ်။ လူတယောက်ကို သူက ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ သူဘာလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ ထမင်းကိုကြိုက်တဲ့ စားတဲ့ အာရှသားတွေထက် ပေါင်မုန့်စားတဲ့ ဘုိုတွေအဖြူတွေ က ပိုမမြင့်မြတ်သလိုပဲ မိန်းမကို ကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားက ယောက်ျားချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားထက်ပိုမမြင့်မြတ်ပါဘူး။ သူ့အလုပ်ကသာ သူ့တန်ဖိုးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာပါ။ MSM အများစုကိုလဲ အဲ့လိုမမြင်ကြဖို့ ကိုယ့်ကို အဲ့လိုလာမြင်ကြရင်လဲ လက်မခံကြဖို့ အားပေးပြောကြားချင်ပါတယ်။
Q:လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လူထု အကျိုးပြု အလုပ်တွေ
Q:ပရဟိတ လုပ်ချင်စိတ် ဘယ်လိုစခဲ့တာလဲ
A:MSM တွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်စိတ်ဘယ်လိုစဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဒီပရဟိတ အလုပ်တွေစလုပ်ဖြစ်လာတာ ပေါ့စတစ်ဖြစ်မှပါ။ အရင်က ကိုယ်က အတ္တကြီးတယ် ဒေါသလဲကြီးတယ် ခုထိလဲ ကြီးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားတော့ တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ် အသိတရားရသွားတယ်ထင်တာပဲ။ အရင်ကထက်စာရင်တော့ လူတွေကို နည်းနည်းပို လုပ်ပေးချင်စိတ်ရှိလာတယ်။ အရင်ကတော့ ကိုယ့်အတွက်ကိုပိုကြည့်တာပေါ့။ အဲ့တာနဲ့ ပေါ့စတစ်ဖြစ်တော့ ဒီ အန်ဂျီအို လုပ်ငန်းတွေထဲကိုရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ကနေစလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ အစပိုင်းကတော့ ပေါ့စတစ်တွေအတွက်ပဲ ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့တယ် ၅ နှစ်လောက်ပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ MSM တွေအတွက်ပိုလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားတာ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝတဆစ်ချိုးပါပဲ။ အကွေ့ကြီးကြီးကွေ့လိုက်ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် အကွေ့ကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ပေါ့စတစ်ဖြစ်တာကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုပြောတာ။ ကိုယ်က ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားမှ ပိုလူဆန်လာတာကိုး။
Q:ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲ တခု ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲ
A:အခက်အခဲတွေကတော့ MSM မဖြစ်လဲရှိနေမှာပဲ။ ပေါ့စတစ်မဖြစ်လဲရှိနေမှာပဲ။ ထုတ်ညည်းနေရင်လဲ ကိုယ့်အခက်မှ ခက်တယ်ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်ထင်တာကတော့ ဘယ်သူမှာမဆို သူ့အခက်အခဲနဲ့ သူတော့ ရှိနေကြတာချည်းပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့။ ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ပဲလိုတယ်။ မကြောက်ဖို့ အရှုံးမပေးဖို့ သတ္တိရှိဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ အဲ့တာတွေရှိရင် အရာရာ ရင်ဆိုင်လို့ရပြီ။ တကယ်လို့ကိုယ်သာ စိတ်ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့နဲ့ ဘဝကို လွယ်လွယ်အရှုံးပေးခဲ့ရင် ကိုယ် ၂၀၀၃ ကတည်းက သေပြီ။ အရာရာစိတ်ပဲ။ စိတ်ဓါတ်သာမကျနဲ့ ပြန်စဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အဲ့လိုပဲခံယူတယ်။ နောက်တခုပြောချင်တာက ကိုယ်က ၁၀တန်းပဲအောင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင် သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အတော်အသင့်အောင်မြင်တယ်ပြောရမယ်။ ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် MSM ဖြစ်လို့ အတန်းပညာနိမ့်လို့ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ အားမငယ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ်တွေရှေ့မှာ ဒီလိုပဲ အတန်းပညာနိမ့်ပေမယ့် အောင်မြင်နေတဲ့ အန်တီချမ်းတယောက်လုံးရှိနေတယ်။ ကိုယ်တွေ MSM တွေက ယောက်ျားတွေ မိန်းမတွေနဲ့ တန်းတူယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တဆင့်နှိမ့်ပြီး ယှဉ်စရာမလိုဘူး။ အဓိက က အသိပညာ နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပါ။ နောက်တခုလဲ ပြောချင်သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကွန်မြူနတီဆိုတာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေရတော့မယ်လို့်လဲ မထင်ကြပါနဲ့။ ပေါ့စတစ်ဖြစ်လို့ MSM ဖြစ်လို့အထောက်အပံ့တွေ အကူအညီတွေတော့ ရတော့မယ် မထင်ပါနဲ့။ လောကကြီးမှာ အလကားရတဲ့ နေ့လည်စာဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တွေက ဘယ်လုိုအနေအထားလဲ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာသိတတ် မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိက က ပထမဆုံး ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာ အသုံးကျတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ နောက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် နောက်တော့ အဲ့ထက်ပိုကျယ်လာတော့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း နောက်တော့ နိုင်ငံ အတွက်ပေါ့။ ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေ ဘယ်နေရာကပဲ လုပ်နေလုပ်နေ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတဲ့ အလုပ်မျိုးသာဖြစ်ပါစေ။ လဲကျရင် ပူမနေနဲ့ ငိုမနေနဲ့ ကောက်ထပစ်လိုက် အခါ ၁၀၀ လဲကျရင် ၁၀၁ ကြိမ်ပြန်ထပစ်လိုက်။ ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့။
Posted on May 4, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်း10 Comments on နိုဝင်ဘာလ
ယောက်ျားတွေပေးတဲ့ ကတိက ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ပျော့ သွားအောင်၊ အရည်ပျော်သွားအောင် ပြောနေပါစေ၊ ရင်သတ်ရှုမော ဖြစ်နေပါစေ အများစု အဓိပ္ဗါယ်ကတော့ တသက်လုံး ချစ်ပါမယ် စောင့်ရှောက်ပါမယ်တွေထဲက မထွက်တဲ့ မွဲပြာပုဆိုးတွေပါပဲ။ လက်ရှိ သူနဲ့ ချစ်နေတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို ယောက်ျားတယောက်က….
သူ့ကို ပြန်မချစ်တဲ့ သူက တဘက်သတ်ချစ်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး သို့ သူ့ကိုမရွေးချယ်တဲ့ သူရည်ရွယ် ထားသူ၊ သူချစ်ခွင့်ပန်မှု ကိုငြင်းတဲ့ သူ ကောင်မလေးကိုလဲ….
Posted on May 3, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး13 Comments on ယောက်ျားတွေပေးတဲ့ ကတိ
အခုတလော ချဉ်ချင်းတပ်နေတာ ကြက်သားကာလသားချက်လို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်သားပြွန်းပါ။ အဲ့တာနဲ့ တလောက ညဈေးဘက် ရောက်တော့ မြန်မာကြက် ဒီက အခေါ် အိမ်ချက် ပေါ့ အဲ့တာ တကောင်ကို ဝယ်ပါတယ် ၁ ကီလို စွန်းစွန်းလေးထင်တယ်။ ၁၃၅ ဘတ်လား မသိဘူး ပေးရတယ်။ သေချာတာကတော့ မြန်မာပြည်ထက် အများကြီး ပိုပေါတယ် ဆိုတာပဲ။ တီချမ်းဆိုတဲ့ ကာလသမီးချက်တော့လဲ ကြက်သားကာလသမီးချက်ပေါ့ သို့သော်လဲ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ….ငှဲငှဲငှဲ…….(အမှန်ကတော့ မောင်ချက်ပေးတာပါ ကိုယ်က ခိုင်းယုံပဲ) (:=))
ကြက်သားပြီးတော့ ဘူးသီးလဲ ရှာဝယ်ရပါသေးတယ်။ ဒီမှာက မြန်မာပြည်မှာလို ဘူးသီးအကြီးကြီးတွေ မရှိဘူး။ အသေးလေးတွေပဲ ရှိတယ် နုတော့ ပိုနုတာပေါ့ သို့သော် ဘူးသီးကြီးတွေကိုမှ ဘူးသီးထင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကလာ တာကိုးနော်။ သေးလို့ မကြိုက်တာဆိုလို့ဘူးသီး နဲ့ နောက်တခု ပီး………(ဆင်ဆာ) ပဲရှိတယ်။ ထား။
ပြီးတော့ ဆီနည်းနည်းထည့် ဆားနဲ့ အချိုမှုန့်ကတော့ ခုနက ကြက်သား နှပ်တုံးက ထည့်ပြီးဖြစ်လို့ ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးနော်။ ကဲ ပြင်ဆင်တာတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ စချက်ကြရအောင်……
ရေထည့်ပလိုက်တယ်။ ဘာမှ တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ သို့သော် ကိုယ်က ပါးစပ်နဲ့ ချက်မယ့် သူ၊ တခါ ဘလောခ်မှာလဲ တီချမ်းဟင်းချက်နေသည် ကဏ္ဍာလေနော်။ ဒင်း ဟင်းချက်နေသည် မှ မဟုတ်တာ။ လူတွေကလဲ တီချမ်း ချက်တာ ကောင်းလွန်းလှချည်ရဲ့ အရသာရှိလှချည်ရဲ့ လိုက်ချက်ဖို့ နည်းလေးတွေ လွယ်လှချည်ရဲ့ စာရေး ကောင်းလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး လာကြ ဘတ်ကြ နည်းနိသျယူကြတာမှလား။ ဘယ်သူကများ ဒင်းကြောင့်လာတာ မှတ်လို့။ အဲ့တော့ မကောင်းရင် တီက နာမည်ပျက်မှာလေနော်။ အဲ့တော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သမိုင်းပေး အစဉ်အလာ အရ မိန်းမသည် လင် ကို တဗျစ်တောက်တောက် တော့ အနည်းကလေး လုပ်ရပါတယ်။ ဘယ်တော့ မှ ဒင်းတို့ ကို လွယ်လွယ် အလျော့မပေးနဲ့။ မရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်နည်း သင်တန်းတွေမှာ ပေးလေ့ရှိတဲ့ GPT နည်းကိုသာသုံး။ အော် ဘာလဲ မသိဘူးလား။ အလွယ်ပြောရင်တော့ ညှစ် ဆွဲ လိမ် ပေါ့ကွယ်။ Grip, Pull and Twist ပေါ့ ဘာကို ညှစ်မလဲ ဘာကို ဆွဲ မလဲ ဘာကို လိမ် မလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပေါနော်။ တီကတော့ အဆင်ပြေရာ လက်လှမ်းမီရာပဲ ဟင်းဟင်းဟင်း…..ဆက်ချက်ကြမယ် ပြောပါ
တယ်။ ထား။ ဒါတောင်ဒင်းက အထွန့်တက်ချင်နေသေးတယ်။ သူတို့ တောမှာဆိုရင် ကာလသားကြက်ဆိုတာတဲ့ သူခိုးကြီးညမှာ အလစ်သုတ်တဲ့ ကြက်ကို ပိုင်ရှင် မသိအောင် အမြန်နည်းနဲ့ ချက်ပြီး ကာလသားတွေက ဆွဲပြစ်တာ ဆိုပဲ။ ရေတွေဘာတွေတောင် သေချာမဆေးဘူး ဒီလိုပဲ အကုန်ပစ်ထည့် အမြန်ချက် ကြတာတဲ့။ ပြောပလိုက် ခု နင်ရောင်နေတာ တော မဟုတ်ဘူး ဘန်ကောက်မြို့လို့……………. (မသေးမျှင် အသံတော့ ခဏ ငှားသုံးရတာပေါ့အေ)
ကြက်သားတွေကို ရေနဲ့ အရင်တည်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်….ကြက်သား နူး စပြုရင် ဘူးသီးထည့်ပါ။ ဘူးသီးကို အစကတည်းက တမင် ထည့် မနှပ်ထား မနယ်တာ မချက်တာက ကြက်သား မနုရင် ဘူးသီးပြဲမှာ စိုးလို့ပါနော်။ နောက်တော့မှ ရေလိုသလောက်ထည့်။ အရသာ ချိုပေါ့ငံမြည်း တီ့နည်း အတိုင်း လိုရင် ထည့် ပိုရင် ရေရော။ အိုကေပြီဆိုရင် ရပါပြီနော်။
ကဲ မိန်းဟင်း တခွက်ရပြီဆိုတော့ အရံဟင်း ချက်ရပါမယ်။ သာကီမျိုးတွေမှလား။ မင်းတုန်းမင်း လောက်တော့ အပွဲ ၃၀၀ မဟုတ်ပေမယ့် (အဲ့တာ အလကား ဇာချဲ့ ပြီး ဖြုန်းတီးတာ သက်သက် လို့ ကိုယ်ကတော့ ထင်ပါတယ်။ အင်းလေ… အဲ့တာ ရယ် နောက် တခု နှစ်ခု ရယ်ပဲ သူတို့မှာ လုပ်စရာရှိတာကိုးနော်) မိန်းဟင်းတခု အရံ တခုလောက်တော့ ရှိမှ ကောင်းတာပေါ့နော်။ မရှိတဲ့ အခါလဲမရှိတဲ့ အလျောက်စားဖြစ်ပါတယ်။
Posted on May 1, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အချိုချက်, အသုပ်များ13 Comments on ကြက်သားပြွန်း (ကြက်ကာလသမီးချက်)